Abaphindezeli: I-Ofisi yeBhokisi ye-Endgame inkulu kakhulu kunokuba besicinga - Iimuvi
Eyona Iimuvi 'Abaphindezeli: Umdlalo wokugqibela' Wenze iMali engakumbi kunokuba besicinga ukuba kunokwenzeka
'Abaphindezeli: Umdlalo wokugqibela' Wenze iMali engakumbi kunokuba besicinga ukuba kunokwenzeka
Abagibeli: Umdlalo wokugqibela wenze imali eyoneleyo yokuwanelisa ngokupheleleyo uThanos.Ukumangaliswa
Ukumangaliswa kweminyaka elishumi ekwenzeni Abagibeli: Umdlalo wokugqibela Iphule irekhodi leofisi yebhokisi yexesha lonke ebigcinwe ngaphambili I-Avatar nge-2.79 yezigidigidi zeedola kwintengiso yetikiti. Ngaphambi kokukhutshwa kwefilimu, akukho mpela veki kwimbali yefilimu eyakhe yadlula i-300 yezigidi zeedola kwibhokisi yasekhaya xa kubalwa zonke iifilimu ezikhoyo; Igama lokugqibela uzuze i-357.1 yezigidi zeedola kwisakhelo sayo sokuvula ngokwakho. Zonke iibhentshi zebhokisi yeemovie zebhanyabhanya ziitotali ezimangalisayo ezichaza kwakhona amathuba e-blockbuster cinema kunye nokuqonda kwethu ezoqoqosho emsebenzini. Kodwa iinombolo zebhokisi eluhlaza azingoyena mntu uphumeleleyo kunye nokusilela eHollywood.
Olona phawu lwentsebenzo yemali luyinzuzo esulungekileyo ebalwa emva kohlahlo-lwabiwo mali lwemveliso, indawo zorhwebo, ukuthatha inxaxheba kwetalente kunye nezinye iindleko ezihlanganisiweyo kubalo lokugqibela. Ngethamsanqa, Umhla wokugqibela Ibaleka ngeyona bhanyabhanya inenzuzo enkulu yonyaka ukusinika umfanekiso okhawulezayo wemali. Ngomhla wokukhumbula unyaka omnye Abagibeli: Umdlalo wokugqibela 'Ukukhululwa, baveze ukuba incopho ye-Marvel Cinematic Universe-ekunokwenzeka ukuba eyona ifilimu ibiza kakhulu eyakha yenziwa -Kwenziwe i-890 yezigidi zeedola kwinzuzo yenzuzo. UBob Iger noKevin Feige kusenokwenzeka ukuba basaphula i-champagne kwiinyanga ezili-12.
BONA KWAKHO: INetflix kunye neDisney + bayaphumelela kumlo wokukruquka
Itotali iphawule ukutsiba kweepesenti ezingama-78 ukusuka kwi-2018's Abaphindezeli: Imfazwe engapheliyo , yeyiphi wakhokela yonke iHollywood nge- mammoth eyi- $ 500 yezigidi kwinzuzo. Igama lokugqibela uzuze i-1,2 yezigidigidi zeedola kwimpelaveki evulekileyo yokuvula umhlaba wonke yedwa, eye yakwazi ukugubungela kwangoko imveliso yefilimu eyi- $ 511 yezigidi kunye neendleko zokuthengisa zehlabathi, ngoMhla obekiweyo. Igama lokugqibela Iitotali ziyachukumisa ngakumbi xa ucinga ukuba yimalini eya kubalingisi.
Ukuthatha inxaxheba kwetalente kunyuke ngeepesenti ezingama-25 ukusuka Imfazwe engapheliyo ($ 140 yezigidi), ene- $ 175 yezigidi eziya ezinkwenkwezini Igama lokugqibela . URobert Downey Omnci. ixelwe Ufumene i-20 yezigidi zeedola ngaphambili kwifilimu ene- $ 55 yezigidi kunye nokudibana kwinzuzo yokubuyela umva. U-Scarlett Johansson kuthiwa ufumene umvuzo kwi Uluhlu lweedola ezingama-20 Ngelixa uChris Evans kunye noChris Hemsworth bakholelwa ukuba bahlawulwe i-15 yezigidi ukuya kwi-20 yezigidi zeedola.
I-Disney ineefilimu ezine kwezona zintlanu zinexabiso eliphezulu kwi-2019 Igama lokugqibela ($ 890 yezigidi), Frozen 2 ($ 599 yezigidi), INgonyama yeNgonyama ($ 580 yezigidi), kwaye UCaptain Marvel ($ 414 yezigidi). Ukungena kuphela kwe-non-Disney phakathi kwabahlanu abaphezulu kwakuyifilimu yeWarner Bros. DC Joker , eyabambisa i-437 yezigidi.
Ngaphezulu kweefilimu ezingama-23, i-Marvel Cinematic Universe ifumene i-22.5 yezigidigidi zeedola, iyenza ibe yeyona bhokisi iphumeleleyo kwi-ofisi kwimbali yesinema. I-avareji ye-MCU Flick ithatha i-982 yezigidi zeedola kwihlabathi liphela kwaye iyonwabele i-135 yezigidi zeerandi yokuvulwa kwamakhaya, ngokwezibalo. Iifilimu ezintlanu zokugqibela ze-franchise zigqithile kwi-1 yezigidigidi zeedola kwintengiso yetikiti ezimbini zazo zingenise i-2 yezigidigidi zeedola.
Kodwa, unikwe impumelelo yokwaphula umhlaba ye- Abagibeli: Umdlalo wokugqibela kwaye umhlaba omtsha oza kugutyungelwa kwiSigaba IV, unako Ukumangaliswa kugcina ukukhula ngaphandle koncedo lweebhloko zokwakha?
Ngaba iCalifornia yeyona ndawo ilungileyo yokuya kwiSikolo soBugcisa?
'Umfazi Olungileyo' Phindaphinda i-7 × 17: Indawo yokuNcamisana
'Ngokuhlwanje SiQhushululu' kunye nokunyuka komdlalo weVidiyo yoNontlalontle
URobert F. Kennedy, Omnci. Undinike nje iidola ezili-12, 500 kuWhitewash Cousin's Past Murderous
iofisi kunye neepaki kunye necrossover
Eyona nto iphambili ekubuyiseleni umnxeba simahla
I-brooke shields umthetho kunye ne-odolo svu
Eyona testosterone testosterone yokukhuthaza i-gnc
umhobe wesizwe ityala lenkundla ephakamileyo
ivela phi inqanawa yefaskoti eluhlaza
Impindezelo yeebhokisi zemfazwe ezingapheliyo zebhokisi